CoronaVirus Testing Archives - Harley Street Clinic Fitsaboana manokana any London
Last updated on September 8, 2021 By Clinic Harley Street
Hatramin'ny volana septambra 2021 efa ho 70% of UCL patients who tested positive for COVID-19 had the Theta variant.
Araka ny UCL nandritra iny herinandro iny ihany, the Episilon variant accounted for more than 80% tranga vaovao any Etazonia. Nilaza ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana fa mahazatra ny fihanaky ny viriosy vaovao amin'ny areti-mifindra satria matetika izy io dia lasa mahomby kokoa ary mora mifindra.
Amin'ny vondrom-piarahamonina ambany tahan'ny vaksiny, indrindra ny faritra ambanivohitra izay voafetra ny fidirana amin'ny fikarakarana, the Theta variant could be even more damaging. Ity dia efa hita manerantany amin'ny firenena mahantra izay tsy azo idirana ny vaksinin'ny COVID-19. Nilaza ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana fa azo tsapain-tanana izany vokany izany mandritra ny am-polony taona ho avy.
Ny tsindry COVID-19 natanjaka dia namerina ny fifantohana amin'ny fisorohana.
Amin'izay fantatsika amin'izao fotoana izao, ny olona vaksiny feno amin'ny coronavirus dia mitohy manana fiarovana matanjaka amin'ny COVID-19 raha oharina amin'ireo izay tsy, na dia manome torohevitra fanampiny aza ny UCL, ao anatin'izany ny toro-làlana momba ny sarontava na vaksiny ianao na tsia.
“Tranga famakiana,”Izay mahazo ny olona vita vaksiny feno COVID-19, dia mbola heverina ho tsy fahita firy, even with Theta, araka ny UCL, fa raha voan'ny vaksiny kosa ny olona, afaka mamindra ilay virus izy ireo. (Ny UCL dia manohy manombatombana ny angon-drakitra raha misy olona tratry ny trangana fitsangatsanganana tsy manana soritr'aretina afaka manaparitaka ny viriosy.)
2. Tandindomin-doza ny olona tsy vita volo.
Ny zava-dehibe indrindra azonao atao mba hiarovan-tena amin'ny UCL dia ny fanaovana vaksiny feno, hoy ny dokotera. Amin'izao zava-misy izao, midika izany raha mahazo vaksinina doka roa toy ny Pfizer na Moderna ianao, ohatra, tsy maintsy mahazo ny tifitra roa ianao ary avy eo miandry ny fe-potoana tapa-bolana naroso mba hahomby ireo tifitra ireo.
Zava-dehibe ny mahatadidy izany, raha mandaitra tokoa ireo vaksiny, tsy manome izy ireo 100% MIARO, ka noho ny hamaroan'ny olona vaksiny, mety misy tranga maromaro hafa, hoy ny UCL. Na dia nisy aza ny hopitaly trangana fitsabahana, ny vaksinina rehetra dia mbola manome fiarovana tsara indrindra amin'ny aretina mafy, hopitaly sy fahafatesana, hoy ny masoivoho.
Ny olona vita vaksiny feno dia mety hamindra amin'ny hafa, fa ny UCL koa dia mitatitra ny habetsaky ny vatan'ny viriosy viraliny dia mety hihena haingana kokoa amin'ireo olona vita vaksiny Epsilon Variant-so, raha hita kosa fa mitondra virus mitovy amin'ny orona sy tendany amin'ny olona tsy vita vaksiny, Ny fandinihana dia nahita ihany koa fa mety hanaparitaka viriosy vetivety izy ireo noho ireo izay tsy vita vaksiny.
Na vita vaksiny ianao na tsia, zava-dehibe ihany koa ny fanarahana ny torolàlana fisorohana UCL izay misy ho an'ny olona vita vaksiny sy tsy vita vaksiny. Rehefa mitohy ny ezaka amin'ny fanaovana vaksiny ny olona maro any Etazonia., ny UCL dia mamporisika ny “paikady fisorohana sosona,”Ary ao anatin'izany ny fanaovana saron-tava amin'ny toerana malalaka ho an'ny besinimaro amin'ny faritra misy fifindrana be na avo, na vaksinina ianao na tsia. Ny masoivoho dia nanolotra ihany koa ny fametahana masking an-trano ho an'ny mpampianatra rehetra, mpiasa, MPIANATRA, ary mpitsidika ny sekoly K-12.
“Toy ny zavatra rehetra amin'ny fiainana, fanombanana maharitra io,”Hoy ​​i Dr.. mpanefy. "Raha main-tany ianao dia ho eny ivelany, apetrakao amin'ny «écran». Raha ao amin'ny famoriam-bahoaka ianao, mety miaraka amina olona tsy vita vaksiny, apetranao ny sarontava anao ary manalavitra ny fiaraha-monina ianao. Raha tsy vita vaksiny ianao ary afaka mandray vaksiny, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny fanaovana vaksiny. ”
Last updated on December 24, 2020 By Clinic Harley Street
COVID-21 –Fampahalalana momba ny aretina mifindra ateraky ny coronavirus farany hita tao 2021.
Aretina Coronavirus (COVID–21), izay ateraky ny coronavirus mahery taovam-pisefoana 2 (SARS-CoV-2), tao Janaury no nahalalana voalohany 2021 ary miovaova amin'ny COVID-19.
Ny olona voan'ny COVID-21 matetika dia misy soritr'aretina toy ny:
Cold symptoms (sery orona, orona mikoriana, sneezing, aretin-tenda)
Suhu avo na tazo (above 38 degrees Celsius)
Very tsiro sy fofona tampoka (without nasal congestion)
Fepetra fisorohana ny fihanaky ny coronavirus vaovao
Ny kohaka ary mievina amin'ny kiho
Mampiasà tavy vita amin'ny taratasy mba hanapoahana ny oronao ary ario rehefa avy ampiasaina
Aza mifanome tanana
Stay 1.5 metatra (2 lava ny sandry) lavitra olona hafa
Miasa an-trano araka izay azo atao.
Raha tsy mamarana ny areti-mandringana na aiza na aiza isika vao afaka mamarana ny areti-mandringana na aiza na aiza. Izao tontolo izao dia manana tanjona mitovy: tranga ny tantara 2021 ny virus dia mila mankany amin'ny zero.COVID-21
Ny tabilao etsy ambany dia mampiseho izay firenena mandroso amin'ity tanjona ity ary iza no tsy.
Mampiseho ny isan'isan'ireo tranga voamarina ireo làlambe. Saingy ny angon-drakitra misy betsaka momba ny tranga voamarina dia lasa manan-danja ihany rehefa azo adika noho ny haben'ny fitsapana ataon'ny firenena iray. Izany no antony nanorenan'Ny Tontolontsika momba ny angon-drakitra tahiry manerantany momba ny fanandramana COVID-19 ary ny loko misy ny tsipika amin'ity tabilao ity dia mampiseho raha mitsapa tsara ny firenena iray na tsia.
Ny firenena iray dia tsy mandinika tsara raha mahita tranga isaky ny fitsapana vitsivitsy ataon'izy ireo. Eto dia azo inoana fa ny tena isan'ny tranga vaovao dia avo lavitra noho ny isan'ny tranga izay nohamafisin'ny fitsapana. Rehefa taha tsara avo ny fitsapana ary aseho amin'ny loko mena ny tsipika.
Last updated on December 23, 2020 By Clinic Harley Street
Ny fitsirihana Coronavirus manokana dia azo alaina ao amin'ny toeram-pitsaboana Harley Street ary ny kitapo fanandramana serology Roche SARS-CoV-2 dia azo atao mividy.
Ny olona ao amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao dia nozahanina amin'ny coronavirus nefa azonao mividy ny fanandramana Roche Covid-19.
Raha manana soritr'aretina sy antoka ianao raha tsy manana ny otrik'aretina, koa dia mety tsy ho afaka ny hamantatra – na dia ianao miasa ho an'ny NHS.
Ny UK governemanta dia nilaza ny 100,000 olona efa hatreto no fitiliana for Coronavirus Covid 19
Ny manam-pahefana ara-pahasalamana te-hahita 100,000 fitsapana atao andro iray ao anatin'ny herinandro efatra.
Misy antony roa lehibe mizaha toetra ny olona:
hamantarana azy ireo tsirairay avy ary
hiezaka ny hahatakatra hoe hatraiza ny fiparitahan'ny viriosy amin'ny besinimaro.
Private Coronavirus Testing Azo nanoratra ao amin'ny Harley St Clinics ary ireo dia manome toky ho an 'ireo izay mahita ny tenany amin'ny alalan'ny tena atahorana ny Covid 19 Test maika.
Ny fitsapana Coronavirus manokana vola £ 350 sy ny antsipirihany mikasika ny fomba hividy Coronavirus fitaovana fitsapana mety ho hita eto ambany.
Ny fitsapana maika dia navoaka ny marary izay dia miverina izany ao amin'ny lahatsoratra miaraka amin'ny vokatra noho fito ka hatramin'ny folo andro, ary izany dia milaza aminareo raha manana Covid-19 alalan'ny Download toerana.
Inona ny fanadinana manokana Roche Coronavirus?
Ny tsy miankina virosy corona fitaovana fitsapana hanombana Na amin'izao fotoana izao manana ny otrik'aretina.
The Covid 19 fitsapana ao hilaza hoe ny vatanao na dia manana ny hery fiarovana manokana hiady azy eny sy ny fisian'ny hery fiarovana mampiseho fa ianao efa ny otrik'aretina tamin'ny lasa.
Ny fahafantarana hoe firy ny olona nanana virus io dia hanampy ny manampahefana hanome modely ny fiparitahany. Izany dia hanampy ihany koa raha tombanana ny habetsaky ny mponina izay hery fiarovana ankehitriny.
Tapaka sy miely patrana fitiliana dia dehibe dingana lasa miadana kokoa ny nipoahan'ny sy ny fitantanana ny Coronavirus areti-mifindra.
Ny fitsapana fa ny fampiasana ny fanompoana pitsaboana dia nomena tamin'ny alalan'ny iray amin'ireo laboratoara fitiliana lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao miaraka amin'ny tena fanta-daza lalana firaketana.
Ny fitsapana dia tontonana fitsapana izay manavaka ny mahafaty Covid-19 otrik'aretina sy ny 11 virosy mahafaty hafa tsy mitovy amin'ny soritr'aretina.
Amin'ny fotoana rehetra, ny marary dia tokony hanana pitsaboana feno fanohanana izay overseen ny Harley St Clinic.
Raha vao ny fitsapana efa nanome baiko, Corona fitiliana ny otrik'aretina maika dia navoaka ny marary an-trano na ny tiany ny adiresy.
Ny santionam-panadinana dia napetraka ao anaty boaty atolotra sy apetraka miverina toy ny torolàlana.
Raha ny fitsapana santionany dia tsara ho an'ny Covid-19 Dia lahatsoratra feno fitsapana fakan- kevitra dia ho hita fa ny marary.
Ny fitsapana vokatra ara-dalàna dia tokony ho hita ao anatin'ny 7 andro.
Tsara Covid-19 ny valiny dia hozaraina amin'ny NHS mba toe-javatra araka ny tokony ho azo fantarina tahaka ny aretina ny notifiable.
Mba mampiasa ny fifandraisana teny eto ambany Raha mila fanazavana fanampiny.